Dad xaday gargaarka dadka tabaalaysan oo lagu xiray Baladwayne. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa xalay waxaa lagu qabtay gaadiid lagu soo raray qeybo kamid ah Gurmadkii loogu talalay dadkii dhawaan halkaas uu ku saameeyay fatahaada Wabiga Shabeelle oo lagu dejinaayay Bakhaar ku yaalla Baladweyne.
Dhame Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo ah Xeer ilaaliye ku-xigeenka Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida qeybta 27 ayaa sheegay in dadka deegaanka ay kusoo wargeliyeen in gaadiid sida raashin lagu dejinayo Bakhaar, wuxuuna xusay intaas kadib in Ciidamo ay u direen goobta lagu dajinayay gaadidka.
Sidoo kale Dhame Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaa waxaa uu tilmaamay in gacanta lagu dhigay Ninkii lahaa Bakhaarka lagu dejinaayay raashinka Gurmadka ahaa iyo ragii arrintaas ka shaqeeynayay, isagoo sheegay in la xiray, isla markaana baaritaano lagu sameeyn doono.
Si kastaba Ciidanka amniga Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa qaaday tallaabo muhiim ah, taasi oo ay uga hortageen Raashin gargaar ah oo la doonayay in la musuq-maasuqo, iyadoona ay xusid midan tahay in Baladweyne iyo duleedkeeda ay ku sugan yihiin boqlaal qoys oo dhibaateysan.
Previous articleAlshabaab oo Khaarijisay Gudoomiye iyo Gudoomiye kuxigeen katirsanaa Maamulka Hirshabeele.
Next articleHillary Clinton oo markale diyaar u ah in ay la dagaalanto Madaxwayne Trump.